Disneyland Vacation Ao Paris Nandritra Winter ary ny fahavaratra | Save A Train
Home > Fiaran-dalamby Frantsa > Disneyland Vacation Ao Paris Nandritra Winter ary ny fahavaratra
Fotoana famakiana: 5 minitra(Last Nohavaozina: 24/04/2020)
Disneyland Paris matetika no voalohany iraisam-pirenena Disney Park maro mpankafy hitsidika. No tianao ho fantatra ny fomba tsara indrindra Disneyland drafitra ny fialan-tsasatra tao Paris nandritra ny ririnina sy ny lohataona? Dia efa tonga any amin'ny toerana! Any in Marne-la-Vallée, ny manodidina an'i Paris, Disneyland Paris dia mikasika ny 45 minitra avy any afovoan-tanàna amin'ny alalan'ny fiaran-dalamby. The manontolo ala nenina dia ahitana 7 ofisialy Disney-nanana lohahevitra trano fandraisam-bahiny, mpiara-miombon'antoka maro trano fandraisam-bahiny, ny fialam-boly sy ny Disney Village fiantsenana distrika, ary ny roa zaridaina: Parc Disneyland sy ny Walt Disney Studios Park. Faly mitsidika? Eto isika dia mizara ny sasany ny torohevitra tsara indrindra fa miaina ririnina andro na vakansy fahavaratra amin'ny Disneyland Paris.
Raha mitsidika ianao Eoropa voalohany, Nahoana raha mijery ny lisitry ny zavatra tsy tara ianao raha nitsidika Eoropa: ETO
Tantaran'ny News About Disneyland Vacation ao Paris Nandritra Ririnina sy ny Summer
Disneyland Paris mitady mahafinaritra! Izany no mpitari-dalana amin'ny ny fomba tsara indrindra Disneyland drafitra ny fialan-tsasatra tao Paris nandritra ny ririnina sy ny lohataona, fa mahagaga ny marina amin'ny zavatra rehetra vanim-potoana. Vao haingana, noho ny goavana refurbishments teo anatrehan'ny Disney Paris tsingerintaona, ny ankamaroan 'ny kianja dia haverina amin' ny tany am-boalohany famirapiratany. Ny fankalazana no efa tapitra, nefa mbola misy vaovao tsara. Ny ankamaroan'ny fialam-boly vaovao mitoetra! yay! Izany koa dia ho bebe kokoa nameno amin'ny Halloween sy ny fialam-boly Noely ny alalan 'ny faran' ny taona.
Raha mieritreritra ianao momba ny nitsidika teo am-piandohan'ny 2019, ny Legends ny Force Star Wars hetsika mihazakazaka Janoary 12 ho Martsa 17, 2019, ary ny Pirates & Andriambavy Festival no hitranga Janoary 19 ho Martsa 17, 2019. Aorian'izay, Gaga Season ny Super-Heroes dia hihazakazaka amin'ny Martsa 23 an'i Jona 16, 2019, ary ny Lion Malagasy ary Jungle Festival hitranga Jolay ka hatramin'ny Septambra 2019, nanaraka ny Halloween sy ny Noely fizaran-taona.
Lyon Airport mankany Disneyland Marne-la-Vallee fiaran-dalamby
Rahoviana Ianao no Tokony HITSIDIKA Disneyland PARIS?
Raha toa ianao lavitra teny hoe pandaharam-potoananao sy ny te-ho vonona tanteraka ho an'ny Disneyland fialan-tsasatra any Paris nandritra ny ririnina sy ny lohataona, dia izany Info hahatonga anao mitsiky. Disneyland Paris dia nanambara ny drafitra lavitra ezaka izay tafiditra Marvel, Adin-kintana, ary gilasy izay tafiditra ao ny $2.5 lavitrisa revitalization ny Walt Disney Studios Park.
Multi-taona ity ny Walt Disney redevelopment Studios Park dia hakodian'ny olona avy amin'ny dingana nanomboka tamin'ny 2021. na dia, fa tena azo inoana fa ny kely kokoa dia singa Début amin'ny faran'ny izany teo aloha isan-karazany. Ny ampahany lehibe amin'ny fanitarana hifarana mialoha ny Paris 2024 Summer Lalao Olaimpika.
The Hague any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Maastricht ny Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Cologne any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Frankfurt ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
The Weather in Paris manodidina Martsa /Aprily, ary Septambra amin'ny alalan'ny Novambra dia mangatsiaka, fa mankafy azy io! Ireo no tena mahonon fotoana ny taona, ary na dia afaka oram-panala amin'ny ririnina, fa matetika tsy mangatsiaka loatra tamin'ny tapaky ny volana Novambra. (Mid-to-faramparan'ny Desambra mety ho nanosika ny vintana, anefa.)
Raha mieritreritra ianao momba ny nitsidika teo am-piandohan'ny 2019, ny Legends ny Force Star Wars hetsika mihazakazaka Janoary 12 ho Martsa 17, 2019, ary ny Pirates & Andriambavy Festival no hitranga Janoary 19 ho Martsa 17, 2019. Aorian'izay, Gaga Season ny Super-Heroes dia hihazakazaka amin'ny Martsa 23 an'i Jona 16, 2019, ary ny Lion King sy Jungle Festival dia tonga Jolay ka hatramin'ny Septambra 2019, nanaraka ny Halloween sy ny Noely fizaran-taona.
Disneyland PARIS IN Noely
tsy fanontaniana, indrindra nampihomehy fotoana hamangiana Disneyland Paris no Noely-tsara manodidina tapaky ny volana Novambra rehefa manomboka. matetika, Noely ny Enchanted Disney nihazakazaka izy hatramin'ny vao maraina koa Novambra alalan'ny Janoary. Izany dia fotoana tsara mba hitsidika Disneyland Paris nandritra ny vanim-potoana fanampiny fialam-boly, sy ny haingon-trano tsara tarehy manodidina ny valan-javaboary. Plus, tsy afaka nikapoka ny hahatsapa ny City of Paris nandritra ny fialan-tsasatra volana.
Stuttgart any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Geneva ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Marseille ho any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Luxembourg ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Firy ny ANDRO HO AN'NY Disneyland Vacation ao Paris Nandritra Ririnina sy ny Summer?
Raha toa ianao ka goavana mpankafy, dia indray andro Dia mamela azy io. Manantena izahay fa manana kiraro nihazakazaka tsara! Ny tena tsara, tianao 3 andro ao amin'ny Disneyland Paris. Misy be dia be ny hitrandraka in Parc Disneyland, ary ny valan-javaboary dia mampino tsipiriany, dia mikasa ny allocating 2 na 2.5 andro fa Park no tsara indrindra Bet.
Ny ankamaroan'ny olona dia afaka manatanteraka ny Walt Disney Studios zaridaina amin'ny antsasaky ny andro na andro. Misy ny karazany avy mahafinaritra attractions Ery. Raha toa ka andro iray ihany no ho traikefa Disneyland Paris, dinganina fotsiny ny Studios, ary manao ny Disneyland valan-javaboary.
Winter 2019/2020: Boky maraina koa Aho ka Save
View rehetra Offers
Drafitra mialoha ary tehirizo, amin'ny tsara indrindra ao amin'ny fisian'ny Winter 2019/2020 amin'ny tonga avy 7faha Novambra 2019 ny 1St Aprily 2020. Arindrao ny nofy fety mialoha!
Mitsangàna ho any 25% Off ny Hotel & Park Ticket Package *
Free Half Board **
fa ny halavan'ny manontolo ny nijanona raha mijanona ao amin'ny Disney Hotel na ny Davy Disney Crockett Ranch.
Free Breakfast sy ny Lunch na Dinner ***
mandritra ny roa andro ao amin'ny Disney Parks raha mijanona ao amin'ny Les Villages Nature Paris.
Raha toa ianao mihevitra ho tonga amin'ny fotoana hafa, azafady jereo ny rehetra amin'izao fotoana izao tolotra eto.
NY TSARA INDRINDRA AMIN'NY mitaingina Disneyland Vacation ao Paris Nandritra Ririnina sy ny Summer
Ity no heverinay fa tokony hataonao loha laharana mandritra ny fitsidihana Disneyland Park. Ny sasany amin'izy ireo dia efa faheno raha efa nisy ny Amerikana valan-javaboary, fa misy fahasamihafana matetika ampy (na inexperience na hatsarana) mba hahatonga ny dikan-Paris mahatsiaro ho tsy manam-paharoa. Ary ny tsara indrindra mitaingina eto dia tena iray-ny-a-tsara fanahy mahasarika izay mampiray mahazatra Disney tetika amin'ny tantara vaovao maharenoka-tsipika.
Amsterdam ho any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Antwerp ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
Rotterdam any Disneyland Marne-la-Vallée Lamasinina
Strasbourg ho any Disneyland-Marne La Vallée-Lamasinina
10. Indiana Jones le Temple de Hampidi-doza ny Indiana Jones-sy ny Tempolin'i Hampidi-doza ny
8. Alice ny Nahaliana Labyrinth
6. Les Mysteres le Nautilus-ny misterin 'ny Nautilus
5. Ny Taniere Dragon-Ny Dragon ny Lair
4. Tena Small World
2. Pirates ny Karaiba
Vonona ho Disneyland Vacation tao Paris nandritra ny Fahavaratra sy ny Ririnina sy ny tsara indrindra dikan-Disneyland eto amin'izao tontolo izao? Hitsambikina amin'ny fiaran-dàlamby mankany Paris noho ny fanampian'ny SaveATrain Tsy misy vidiny fanampiny Peaky, izay midika hoe vola bebe kokoa ho an'ny mitaingina! Boky tapakila amin'ny minitra.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary fotsiny hanome voninahitra amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy, na ianao dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fdisneyland-vacation-paris%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
#disneyinsummer #disneylandfrance #DisneyParis Disneyland disneywinter europetravel familyholiday trainjourney fiaran-dalamby soso-kevitra travelfrance mitsidika disney